IBhodi yethu yaBalawuli - Global ARCH
Global ARCH / Ngathi / IBhodi yethu yaBalawuli
U-Amy Verstappen ebengummeli wezigulana kunye nomhlohli wezempilo ukusukela ngo-1996, xa eyakhe imiceli mngeni ephila nesiphene sentliziyo yamkhokelela kwi-Adult Congenital Heart Association, apho wakhonza njengomongameli ukusuka ngo-2001 ukuya ku-2013. Usebenze njengomcebisi Amaziko oLawulo lweZifo iZiko leSizwe leNtliziyo, iMiphunga kunye neGazi; kunye noMbutho waMazwe ngaMazwe weSifo seNtliziyo esiDala sabantu abaDala, kwaye wasebenza nesigulana sentliziyo esibelekweni kunye namaqela eengcali kulo lonke elaseMelika nasehlabathini. UNks Verstappen ufumene iMasters kwiMfundo kwi-1990 kunye neMasters kwi-Global Health kwi-2019.
UDisty Pearson -Sekela-Mongameli
U-Disty Pearson ngumzali wesigulana sesifo senhliziyo esizelwe kunye nomncedisi kagqirha kwisifo senhliziyo yabantu abadala (CHD). Usebenze nezigulane ze-CHD kwiminyaka eyi-40 edlulileyo, okokuqala kuqhaqho lwentliziyo kunye ne-20 yokugqibela iminyaka kunye ne-Boston Adult Congenital Heart Service (BACH) kwisibhedlele sabantwana saseBoston kunye ne-Mass General Brigham. Ulilungu elisungula iBhodi ye-ACHA Medical Advisory Board kwaye ulilungu leKholeji yaseMelika yeCardiology. I-Disty yaqaphela kwangethuba ngokubaluleka kwelizwi lesigulane kunye neentsapho kuzo zonke izigqibo ezichaphazela ukunyamekelwa kwezigulane kwaye uzinikele ekuphuculeni ubomi babo bachaphazelekayo sisifo senhliziyo ebuntwaneni emhlabeni wonke.con
UDavid La Fontaine - Unondyebo
UDavid La Fontaine uthweswe isidanga kwiKholeji yaseHaverford kufutshane neFiladelfiya ngo-1983. Usebenze kuphuhliso lwabantu basezidolophini, kwaye ngoku ukhokela umbutho ongajonganga nzuzo ophuhlisa izindlu ezifikelelekayo kunye neepropathi ezisetyenziselwa izinto ezahlukeneyo ngentsebenziswano nobunkokheli bengingqi yasePhiladelphia. UDavid uzibophelele nakwezolingano kwezempilo kwaye unceda abantu abane-CHD kunye ne-RHD ukuba bafikelele kukhathalelo abaludingayo ukuze baphile ubomi obunempilo.
UShelagh Ross - Unobhala
UShelagh Ross ngumseki-mbumba kunye nomongameli wangaphambili weCanada Congenital Heart Alliance (CCHA), engenzi nzuzo exhasa kwaye ixhase abantu baseCanada abanesifo sentliziyo (CHD). Isigulana se-CHD esine-tetralogy ye-Fallot, kwaye senziwe utyando kunye nongenelelo. Ungumbhali wezonyango kunye nezempilo / umhleli kunye nomphathi wewebhusayithi, kwaye ukusukela ngo-2004 ebengummeli onomdla kuluntu lwe-CHD.
U-Farhan yintshayelelo yentlalontle kunye ne-philanthropist, kunye nomseki kunye ne-CEO yevolontiya ye-Pakistan Children's Heart Foundation, i-NGO esebenzela ukuphuculwa komgangatho wobomi kwizigulane zesifo senhliziyo ezizalwayo ezisweleyo, egxile ekwakheni isibhedlele sentliziyo yabantwana esikhethekileyo eLahore, ePakistan. Waqala umbutho emva kokuba intombi yakhe encinci, owazalwa nge-ventricle enye, yafa ngo-2013. Ukususela ngoko, uye wanikela ubomi bakhe ekukhuliseni ulwazi malunga nesifo senhliziyo esizalwa kunye nokunceda abaguli besifo senhliziyo abahluphekileyo bafumane unyango olufanelekileyo, olufike ngexesha. Yena kunye neqela lakhe baye bakhulisa ngaphezu kwe-4.5 yezigidi zeedola ukuxhasa ngemali engaphezulu kwe-1800 yabantwana abatyando lwentliziyo ukuya ngoDisemba 2019. Phakathi kwezinye izinto, uFarhan uye wakhonza kunye ne-Indus Health Network njenge-COO yokwakhiwa kwesibhedlele esikhethekileyo se-treasury ye-600 eLahore, kwaye yasekwa kwaye yayingumcebisi ophezulu kwi-Maison Consulting & Technology, inkampani ephumelelayo esekelwe ePakistan, e-UAE, e-USA nase-Saudi Arabia. UFarhan unesidanga seB.Com kwiDyunivesithi yasePunjab. Wayethatha inxaxheba esebenzayo kwiNgqungquthela yobuNkokheli beNtliziyo yamazwe ngamazwe e-Barcelona ngo-2017, eyakhokelela ekudalweni Global ARCH.
UFlavia Kamalembo Batureine
UFlavia uhleli nesifo sentliziyo i-rheumatic (RHD) iminyaka eli-9, kwaye ulilungu leqela elixhasa iRheumatic Heart Disease Support eUganda, phantsi kweUganda Heart Institute. Ngeqela lenkxaso, ufikelela kwezinye izigulana, iintsapho okanye abantu ukubonelela ngenkxaso kwezentlalo, ukucebisa, ukuthethelela kunye nophando. Ukwangumongikazi okhathalele kakhulu, esebenza kwicandelo lokhathalelo olunzulu lwentliziyo. Uzinikele ekwaziseni malunga ne-RHD kunye ne-CHD ukuze izigulana zifumane ukhathalelo olufanelekileyo nolufike ngexesha, kunye negalelo kubungqina obusekwe kuphando olusebenzayo ukuphucula ukhathalelo lwabantu abachaphazelekayo yi-CHD kunye ne-RHD. UFlavia wayethathe inxaxheba kwiNgqungquthela yeNtloko yeNtloko yoBuNtloko e-Barcelona ngo-2017, eyakhokelela ekudalweni kwe Global ARCH.
UGqr Vikas Desai
Ugqirha Desai ngugqirha ogqibe impilo yoluntu kangangeminyaka engama-45. Okwangoku unguMlawuli wezoBugcisa, iZiko lezeMpilo eDolophini kunye neZiko lokuQinisa iMozulu lokuGqwesa eSurat City, eGujarat State, e-India. Ungusekela-sihlalo we-trust ebhalisiweyo "iZiko lesizwe loPhuhliso lwaBasetyhini nabaNtwana (i-NIWCD)" kunye namanyathelo akhe i-NIWCD ephehlelele "iProjekti yoKhathalelo lweNtliziyo yaBantwana (i-CHCP)" ngo-2002. Ungumququzeleli wezobugcisa kwimisebenzi ye-CHCP. Ngo-2005 ngenkqubo yenkxaso ye-CHCP yonyango lwasimahla lwe-CHD yabantwana abasuka kumgangatho wentlupheko yaqaliswa nguRhulumente waseburhulumenteni ngoku ongumsebenzi oguqulweyo phantsi kweRashtriy Balsuraksha Karyakram (iNkqubo yeSizwe yoKhuseleko loMntwana).
UNoémi D. de Stoutz
UNoémi wazalwa enesifo sokuphefumla esintsonkothileyo, ibe akazange enziwe utyando lwentliziyo. Ungugqirha ogxile kunyango lwe-oncological, kwaye usebenze kwiiprojekthi zesizwe neze-EU. Ulilungu lombutho wezigulana waseSwitzerland i-ACHD u-CUORE MATTO (uMbutho waseSwitzerland waBantu abadala onesifo sentliziyo ekhulelwe), kunye nelungu elihloniphekileyo le-Swiss Cardiology Association. U-Noémi ufundisa kwaye apapashe kwimicimbi yeNtliziyo eKhulelweyo.
UGrace wayeyisigulana sokuqala sentliziyo esazalelwa eMalaysia ukuba siqhubeke nomsebenzi wotshintsho loTshintsho lweeNtsholongwane eziKhulu. NgeBachelor yoBugcisa (iiHons) kwiDyunivesithi yaseMalaya eMalaysia, uGrace ubambe izikhundla ezininzi kulawulo lwedatha, ucwangciso lwemicimbi, kunye nokuxhobisa nokuqhuba amaqela amavolontiya. Kuwo wonke unyaka we-2020 ebelilungu elixabisekileyo le- Global ARCH ikomiti yonxibelelwano. Ulilungu lobomi labahlobo baka-IJN, iqela lenkxaso yamavolontiya kwiSibhedlele seSizwe seNtliziyo. Ngoku usebenza e-Kingdomcity, umbutho wamaKristu wehlabathi kwiindawo ezininzi kwihlabathi liphela.
UMehwish ngumsasazi kanomathotholo, utitshala, umlweli wentlalontle, isithethi esikhuthazayo, kunye neblogger eLahore, ePakistan. Njengonina wonyana onesifo sentliziyo esizelwe (CHD), ungummeli ongadinwayo kwizigulana zesifo sentliziyo, enceda ezinye iintsapho ukuba zifumane ukhathalelo olufanelekileyo lwentliziyo kubantwana babo abazalwa benesifo sentliziyo. UMehwish livolontiya elizinikeleyo kwaye umntu oza kuzisa ubuchule bokuyila kunye nokwazisa Global ARCH iqela.
U-Lavinia ngumongikazi, imvumi, kunye nonozakuzaku we-RHD eNamibia. Kwiminyaka eyi-9 wafunyaniswa ukuba unesifo sentliziyo esisifo samathambo kodwa iminyaka emininzi waphulukana nokulandela. Njengomntu onemiceli mngeni kwezempilo, uLavinia wakhulisa uthando olukhulu kunye nomnqweno wokunceda nokunceda abanye, ngakumbi abo banemicimbi enxulumene nezempilo. Njengemvumi, uLavinia urekhode ingoma yokwazisa nge-RHD "BUYISA INKQUBO YAKHO", eyasungulwa ngexesha lephulo le-RHD yalapha. Ngoku uqhuba iprojekthi ebizwa ngokuba 'yi-RHD ASIYIYO UKUKHUBAZEKA' ukudala ulwazi malunga nokukhusela umkhuhlane we-rheumatic fever.
Imvelaphi yaseKenya kodwa ngoku uhlala e-United States, uRuth ngumdlali onamava, onomdla, kwaye ohlonitshwa kakhulu kwimpilo yoluntu kunye nengcali. Njengesifo senhliziyo esizelwe (CHD), uRuth waseka umbutho ongenzi nzuzo eKenya Mended Hearts Patient's Association (KMHPA). Ngobunkokeli bakhe obuchukumisayo, umbutho uyaqhubeka nokukhuthaza ngempumelelo isifo senhliziyo esizalwa kunye namalungelo e-RHD, utshintsho lomgaqo-nkqubo, kunye nokudala ulwazi kuluntu.
UDomininique Vervoort, MD
UDominique uthweswe isidanga sezonyango ovela eBelgium onamava abanzi kwicandelo lotyando lwehlabathi, obhalise kwi-Master of Public Health kunye ne-Master of Business Administration kwiYunivesithi yaseJohns Hopkins. Njengogqirha kunye nomnqweno wokwenza utyando lwentliziyo yabantwana kunye nemvelaphi yotyando lwehlabathi, uDominique ube ngummeli onomdla wokufikelela kukhathalelo lwentliziyo olukhuselekileyo, olufike ngexesha, nolufikelelekayo kubantwana abaphila nesifo sentliziyo esizalwayo kunye nesifo sentliziyo samathambo kwihlabathi liphela. Uye waseka kwaye wabambisana usihlalo we-International Student Surgical Network (InciSioN), uthungelwano lwehlabathi lwabafundi botyando olukhulu kunye nabafundi bezonyango abangaphezu kwama-5,000, abahlali, kunye noogqirha abancinci kumazwe angaphezu kwama-80. Ku-Johns Hopkins, ugxininise kuqoqosho lwezempilo, ulawulo lokhathalelo lwempilo, kunye nenkxaso-mali yokunakekelwa kwempilo, ukuqonda ngcono kunye nokuphembelela iingxoxo zomgaqo-nkqubo wasekhaya kunye namazwe ngamazwe kunye nokwabiwa kwezibonelelo kwiinkonzo zempilo.
I-Bistra liSekela-Mongameli weSicwangciso seHlabathi kunye nokuBala kwi-HeartLink yaBantwana. Uyingcali yophuhliso lwamazwe aphesheya anamava eminyaka engama-20 yamava ekuphunyezweni kwenkqubo kunye nokukhuthaza ukufikelela ekuphuculeni ukukhathalela abantwana abadinga iinkonzo zentliziyo yabantwana. Ukhokele kwimizamo yokusebenzisana kwiindawo ezininzi zehlabathi kunye nezenkcubeko namaqela ahlukeneyo abathathi-nxaxheba kwaye unolwazi olunzulu kuyo yonke imiba yolawulo lwe-NGO kunye nokomeleza iinkqubo zempilo. Ukusukela ngo-2003, amava akhe nge-HeartLink yaBantwana amsa kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela emenza ukuba abe ngummeli onomdla kwiimfuno zabantwana abanesifo sentliziyo.